Askari katirsan ciidanka Soomaaliya oo xukun dil ah lagu riday
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah xukun dil toogasho ah ku riday Cabduqaadir Maxamuud Cali, markii ay ku heshay dambi ah in uu degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe uu ku dilay qof shacab ah.
Marxuum Cabdiraxmaan Cadow Maxamuud, oo ahaa darawal gaari, ayaa lagu toogtay goob laga raaco baabuurta oo ku taalo degmadaasi 26-ka bishii December ee sanadkii hore 2018, sida ay sheegtay maxkamada.
C/qaadir, oo ah Dable ciidanka xooga dalka, ayay ciidamada ku qabteen isla goobta falka dilka uu ku geystay, isagoo loosoo wareejiyay saldhiga Booliska degmada Jowhar, halkaasi oo uu maalmo ku qaatay.
Sida ku cad qoraalka maxkamada, kiiskaan ayaa si rasmi ah loogu soo wareejiyay xafiiska xeer-ilaalinta qaranka bishii December, iyada oo 22-kii bishaasi uu amray xafiiska in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Fadhigii ugu horeeyay oo ay maxkamadu ka yeelato kiiskaan ayaa qabsoomay 12-ka bishii Janaayo ee sanadkaan 2019. Hasa yeeshee, dacwad-oogayaasha waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay fadhiyo kale, taasi oo laga aqbalay.
9-ka bishaan Febraayo, waxaa loo balamay fadhigii labaad oo looga dooday kiiskaan, iyada oo afar cisho kadib ay xeer-ilaalintu soo bandhigtay caddeymaha ay hayso iyo markhaatiyaal, waxayna cod-satay in eedaysanaha dil toogasho lagu xukumo.
Qareenada difaacayey eedaysanaha ayaa ka hor-sheegay maxkamada in maadaama uu Askariga qirtay in uu dilka geystay loo fududeeyo xukunka, lagana qaado magta marxuumka.
"Eedaysanaha waxa uu ku liif bartay muwaadin wada marayey," ayuu yiri Dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ka socday xeer-ilaalinta. "Sidaasi owgeed waa in abaalkiisa oo xukun dil ah la marsiiyaan," ayuu raaciyey.
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha Maxkamadda, ayaa maanta shaaciyay in garsoorayaasha ay isku raaceen in xukun dil toogasho ah lagu rido Cabduqaadir, taasi oo ah qisaasta marxuumka.
Go’aankaan ay gaartay maxkamada ayaa kusoo beegmaya iyada oo la sheegayo in wali xabsiyada caasimada ay ku jiraan askar, xubno loo haysto Shabaab iyo Daacish-nimo kuwaasi oo xukuno dil ah lagu riday.
Taliyaha ciidamada xooga, Daahir Aadan Cilmi [Indhaqarshe] ayaa horaantii sanadkaan wacad ku maray in la toogan doono qof kasta oo lagu helo in uu kamid yahay kooxaha argagaxisada iyo askarigii rayid dila.
Farmaajo oo amar siiyay laamaha amniga kadib dilka Xildhibaan Boqorre
Soomaliya 23.02.2019. 21:13
Xildhibaan Boqorre ayaa ahaa xubinta ugu da'da wayn ee Gollaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
Sanbaloolshe: Dowlada amniga dalka waxay kaga mashquushay ficiltan
Soomaliya 09.03.2019. 18:19
Farmaajo oo kormeeray degaano laga saarey Al-Shabaab [Sawirro]
Soomaliya 19.04.2019. 21:31
Toogasho iyo qarax khasaaro dhaliyay oo ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 07.03.2019. 08:30
Mas'uul degmo oo isku day dil kaga badbaaday duleedka Muqdisho
Soomaliya 03.03.2019. 17:01
Soomaliya 26.02.2019. 13:33